Madaxweyne Xassan “Ma’istiri Wali Lamaqabsan Habmaamuuskii Baratakoolka Madexweynanimo” | Somali - Diaspora
Madaxweyne Xassan “Ma’istiri Wali Lamaqabsan Habmaamuuskii Baratakoolka Madexweynanimo”
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Hassan Sheekh Maxamuud ayaa habeen hore kaqeyb galay martiqaad casho sharaf ah oo ay magaalada Kampala ee dalka Uganda ugu samaysey Haweeneyda Soomaaliyeed ee ka mid ah maalqabeennada ee wadankaas Marwo Aamina Xersi Mooge.
Hadaba Maxaan Qoonsadey? markaad baarintaan dheer kusameysid ama aad khibrad uleedahey habmaamuuska Madaxweynayaasha Ma’aheyn in “The Office of the Chief of Protocol” coordinate gareeyo in Guri qof shacab leeyahey Madaxweyne Qaran casho Sharaf loogu sameeyo waxeyna arintaas meelkadha kutahey dadka u qaabilsan (Diplomatic protocol) waayo waxaa kaliya Madaxweynaha Casho Sharaf Guri ugu sameeyn kara oo kaliya. Safiir (Ambassador) Madaxweyne hore (Ex president) ama qof utartamaayo madaxweynanimo (Presidential Candidate) balse wixii intaas kasoo hara isaga ayaad mudan inloogu tago meesha uu deganyahey! waana arin lalayaabo in qof shacab ah uu gurigiisa kubaladansado the “Head of state” Mas’uulkii ugu sareeyey wadanka.
Koley waxaan filayaa sharaxaad intaas ineey iiga filantahey. balse maalin walba waxaad arkeysaa habacsanaan kajirta ama Experience la’aan heeysata dadka kuxeendaanan xafiiska Madaxweynha hadey noqonlaheyd safarkii kashifmey ee talyaaniga uga baaqdeyn ama safarkii hore ee kabaaqdeyn Kenya.
Gaba gabadii waxaan iga talo ah in la iska ilaaliyaan shaqaalaha ee arimhaas khuseeyaan inuu Madaxweynahu yahey like GOLD eeysana Munaasib ku’aheyn inuu xaafadaha lagu sawiro.
Maamulka iyo Maaraynta Dadka iyo Dacwada Magaca “Soomaaliya” waxa uu u socdaa in uu Galo Qaamuuska Dunida